Waxaan dhamaanteen waa mid aad u yaqaanaan xiriir muddada. Marka ay qaar waxa lagu kaydiyaa buugga telefoonada ee casriga ah / mobile ah, waxa uu noqonayaa mid xiriir ah. Maanta ee casriga ah ee xiriir ah oo aad iyo sidoo keydin karaa dhammaan macluumaadka shakhsiga ah, ka lambarka telefoonka cinwaanka, emails iyo xogta bio. Si kastaba ha ahaatee, aad si dhib leh ku eekaan mid phone hal muddo dheer. Waxaad casriyeeyo casriga ah si aad u mid cusub hadda kasta oo markaas. Taas ayaa ka dhigaysa taageerto kor u xiriirada qayb aad u muhiim ah sidii ay qaadanayso muddo aad u dheer si loo badbaadiyo oo dhan xiriirada aad smartphone hore si casriga cusub. Ka sokow, waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale lumiso xiriir haddii wax qalad ah ku dhaca ee aad casriga ah. Tani waa sababta ay taageero ilaa xiriirada caawin karaan wax badan oo ku xiriirada shahaadada aqoonsiga aad badbaadinayo.
Sida casriga ah Samsung hubkaas ayaa loo isticmaalaa adduunka oo dhan, halkan waxaan la hadlayaan doonaa oo ku saabsan habka ee Samsung xiriirada gurmad. Laakiin ka hor inta in sharaxaad faahfaahsan, waxaad u baahan tahay in ay ogaadaan in qalabka Samsung hesho laba nooc oo storages (Gudaha Memory iyo Dibadda Memory) iyo sidaas xiriirada si fudud loo taageeray kartaa ilaa SD Card dibadda (Haddii aad qabto mid ka mid geliyo on your smartphone) ayadoon aan la isticmaalin Codsiga wax-saddexaad.
Qaybta 1. kaabta Samsung Xiriirada on SD Card aan kasta oo cid saddexaad Codsiga Qaybta 2. kaabta Xiriirada ka Samsung Galaxy S3 / S4 / S2 oo dheeraad ah si ay u Cloud Qaybta 3. Top 5 Android Apps in kaabta Samsung Xiriirada 4. Qaybta dhan-in Desktop -one Contact kaabta Tool u Device Samsung
Qaybta 1. kaabta Samsung Xiriirada on SD Card aan Codsiga kasta oo cid saddexaad
Samsung aad bixisaa fursad u taageerto kor u xiriirada on Samsung telefoonka ama kiniin toos ah oo aan gargaar ka mid ah codsiga wax-saddexaad. Si loo sameeyo in aad kala socon kartaa tutorial hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Open Xiriirada aad telefoon ama kiniin ah, ka dibna riix fursadaha iyo shaashad sida image dhinaca midig ka muuqan doontaa.
Tallaabada 2. Laga menu in ay doortaan Import / Dhoofinta > dhoofinta in SD Card , dhoofinta in USB kaydinta ama dhoofinta in SIM card ka dibna xaqiijin dhoofinta doorataa Waayahay .
Tallaabada 3. Xiriiro ilaa aad taageeray in kaarka SD badbaadi doonaa kaadhka SD gudaha ama kaarka SD dibadda sida ay doorashadaada. Waxaa la magacaabi doonaa sida 00001.vcf (markii ugu horeysay aad gurmad), 00002.vcf (markii labaad oo aad gurmad), iyo wixii la mid ah.
Haddii aad u taageeray xiriirada in kaarka SIM, waxaad isticmaali karaan Xiriirada liiska tab si ay u arkaan. Si kastaba ha ahaatee, taageero xiriirada si SIM card ha laga yaabaa in aad ku xanuunsado oo xiriir info khasaaro.
Tallaabada 4. Maalin, marka aad rabto in aad hesho kuwa xiriirka la xoojiyaa, kaliya galaan xiriirada oo ka menu 'doorasho' oo kaliya ay doortaan Import ka SD Card, Import ka USB kaydinta ama Import ka SIM. Oo weliba waxaad ka heli doontaa dhammaan xiriirada aad galay xusuusta telefoonka aad.
Qaybta 2. kaabta Xiriirada ka Samsung Galaxy S3 / S4 / S2 oo dheeraad ah si ay u Cloud
Si kale oo taageero ilaa xiriirada aad Samsung Galaxy S4, S2, S3 ama kale waa in ay ku taageeraan bixiyeyaasha adeegga kaydinta daruur. Waxaad Samsung xiriir kartaan gurmad on Samsung ayaa daruurtii, daruur iwm Google lacag la'aan ah. Waxaa jira bixiyeyaasha kale kaydinta daruur kaas oo bixiya storages daruur haddii aad u bixiso. Qaybtan, waxaan jeclaan lahaa in ay diiradda saaraan sheegaysa sida loo raad raac xiriirada on Samsung in Google iyo Samsung daruur aad.
Jidka 1. kaabta Xiriirada ka Samsung Galaxy S2 / S4 / S3 iyo kuwa kale si ay Google Cloud
Qalabka Samsung harsan nidaamka qalliinka Android oo la soo saaro by Google oo si toos ah loola xiriirinayay in aad xisaabta Gmail. Haddii aad waafajinta aad Samsung xiriir la xisaabtaada Gmail ka dibna dhammaan xiriirada aad la jiraan taageeray doonaa.
Si loo sameeyo in aad u baahan tahay in aadan ka dib wax talaabo talaabo ah.
Tallaabada 1. Tubada Xiriirada aad Device Samsung. Ka dibna riix badhanka dalwaddii tagay si button guriga. In menu pop-up ka, ka jaftaa ku milmaan xisaabta . A menu cusub muuqan doonaa sida image hoos ku qoran:
Tallaabada 2. Tubada ku darsamaan Google oo weydiin doonaa xaqiijinta iyo tubbada OK on wixii si toos ah gurmad doono xiriirada si aad u Google. Haddii aadan u saxiixay in aad xisaabta Google markaas laga yaabaa in aad u saxiixi in la xisaabtaada Google by siyoodba Settings > Accounts ama Accounts & hagaagsan > dar xisaabta > saxiixa shubo xisaabta Google.
Jidka 2. kaabta Xiriirada ka Samsung S4 / S3 / S2 iyo More in Samsung Cloud
Kuwa ku leedahay xisaabta la Samsung kale oo gurmad ah ay xiriir adeega kaydinta daruur Samsung ayaa lacag la'aan ah. Nidaamku wuxuu yahay la mid ah sida habka taageerto ilaa Cloud kaydinta Google.
Si aad dib ilaa xiriirada on account Samsung waxaad u baahan doontaa in la furo xisaabta la Samsung oo aad si fudud u samayn kartaa taleefanka.
Tallaabada 1. Tag Settings on qalab aad oo halkaas waxaad ugu yeelan doonaan in ay soo galaan on Accounts ama Accounts & hagaagsan . Riix Account Add . Waxaa waxaad arki doontaa doorasho kala duwan oo waxaad yeelan doontaa in ay doortaan 'Samsung Account'.
Tallaabada 2. Markaas guji Abuur New Account oo aad u horseedi doonaa in foom aad ka heli doonaa si ay u buuxiyaan la faahfaahinta, username aad rabto iyo sirta qarsoodiga ah waxaa.
Tallaabada 3. Marka aad samaysay la tallaabooyinka kor ku xusan, guji kaliya Next iyo Terms & Xaaladda muuqan doonaa oo waxaad yeelan doontaa in ay aqbalaan iyo hadda xisaabtaada Samsung ayaa diyaar u ah in ay isticmaalaan.
Tallaabada 4. Hadda waxaad waafajinta karo xiriirada in aad xisaabta Samsung si fudud u socda tallaabooyinka howlan xiriir la xisaabtaada Google.
Tallaabada 5. gala Xiriirada ka dibna riix on Xulashada meesha aad yeelan doontaa in ay doortaan midowdo Accounts sidii hore muujisay oo tallaabo saddexaad halkii ay isku darsamaan Google waqtigan waa in aad xulan Marge la Samsung oo ka dibna riix Next . Markaas xiriirada aad yeelan doontaa gurmad ah ee Samsung daruur iyo sidoo.
Qaybta 3. Top 5 Android Apps in kaabta Samsung Xiriir
Waxaa jira barnaamijyadooda badan oo laga heli karo suuqa Android kaas oo noqon kara xiriiryada la Samsung gurmad si fudud. Halkan, waxaan ku qor sareysa 5-ada Android inay gurmad xiriirada Samsung. Marka hore ka eegi kartaa jadwalka hoos ku siiyo. Markaas, xiga isbarashada faahfaahsan app kasta.
Super kaabta: SMS & Xiriirada 4.4 Free 1.5 2.0.1 Android & up
Tag kaabta & Soo Celinta Pro 4.2 Free 3.5 Android 2.2 iyo ilaa
My Pro kaabta 4.6 $4.99 3.5 Android 1.6 iyo ilaa
Mobile kaabta & Soo Celinta 4.5 Free 5.6m Android 2.2 iyo ilaa
Kaabta SMS + 4.2 Free 5.6m 2.0 Android oo ilaa
1. Super kaabta: SMS & Xiriirada
Codsigan waa ugu soo bixi codsiga gurmad u xiriirada Samsung. Codsigan helay xor iyo version bixisay. Waxa ay taageertaa dhammaan qalabka Android tan iyo qalab kasta oo Android socda ee version 2.0.1 ama wax ka sareeya waxaa lagu taageeray. App ayaa lagala soo bixi badan 500,000 oo jeer ee dukaanka play sidoo kale waxay leedahay hal dhibic rating ee 4.4 ah. Codsiga waxa kale oo uu aad u yar in size ee waxay u baahan tahay meel bannaan oo 1.5 milyan oo kaliya.
Isticmaalka codsigan aad awoodo gurmad Apps, SMS, Xiriirada, abuse Call, Calendar, Bookmark. App Tani waa mid aad la isku halayn karo oo aad u fududahay in la isticmaalo, waayo, waxa ay tahay mid ka mid ah hogaanka 5 gurmad barnaamijyadooda.
Download Super kaabta: Xiriirada SMS & ka Google Play Store >>
2. Tag kaabta & Soo Celinta Pro
Codsi kale oo caan ah oo xiriir gurmad waa kaabta Go & Soo Celinta Pre oo la soo saaro by devsteam. Codsigan ayaa waxaa lagala soo bixi badan 500,000 oo jeer ka dukaanka app iyo weli xambaarsan dhibic rating ee 4.2 ah. Waxa ay taageertaa qalabka socda ee Android 2.2 iyo sare.
Iyada oo ay caawimo, aad awoodo xiriirada Samsung si fudud gurmad. Waxa kale oo aad gurmad SMS, MMS, wici kartaa gasho, Browser Bookmark, entries Calendar, files .apk iyo faylasha kale warbaahinta iyadoo la isticmaalayo app this.
Download kaabta Go & Soo Celinta Pro ka Google Play Store >>
3. Pro kaabta
App Tani ayaa lagala soo bixi badan 500,000 oo jeer ka dukaanka cayaarta oo hantidaan dhibic rating ee 4.6 ah. Waa codsiga lacag oo qiimaheedu yahay $4.99 dukaanka play. Waxaad awoodi kartaa xiriirada gurmad oo keliya ma aha, laakiin ku dhowaad wax walba oo ku saabsan telefoonka. Waxaad sameyn kartaa in gurmad Samsung Xiriirada, SMS, MMS, Bookmarks, Media, Log, entries Calendar galay server daruur codsigan ee. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa bannaan oo dheeraad ah oo ay bixiso xaddi gaar ah haddii aad ka soo baxdo si aad meel lagu kaydiyo daruur. Ka sokow, waxaad samayn kartaa jadwalka dib ilaa adigoo isticmaalaya app this.
4. Mobile kaabta & Soo Celinta
App Tani waa gurmad kale app caan ah oo qalabka Samsung. Waxaa kale oo lacag la'aan ah lagu kaydiyo play ah oo waxaa la soo bixi badan 500,000 oo jeer. Waxa ay taageertaa Android version 2.2 iyo wixii ka sareeya oo codsigan ayaa la soo saaray shirkadda software antivirus avast.
App Tani gurmad wax walba oo ku saabsan qalab Samsung a kartaa: xiriirada, sawiro, SMS, videos iwm kartaan xogta cusub oo si toos ah raad raac ah oo ku saabsan qalab aad waqtiga jadwalka.
Download Mobile kaabta & Soo Celinta ka Google Play Store >>
5. SMS kaabta +
Waa app kale caan ah oo Samsung xiriir gurmad, inkastoo magaca sheegay kaabta SMS. Inkastoo app cusub, waxaa la soo bixi badan 500,000 oo jeer oo helay rating ah 4.5. Waa bilaash in lagu kaydiyo play ah. Waxa ay taageertaa qalabka socda ee Android 2.0 iyo wax ka sareeya.
App Tani taageeray ilaa Xiriirada oo SMS ah qalab Samsung oo kaliya. Waxaad samayn kartaa auto gurmad oo badbaadin doonaa waqti iyo shaqada sida haddii aad dhigay auto gurmad markaas mustaqbalka ma dhici doonto in gurmad gacanta.
Download kaabta SMS + ka Google Play Store >>
Kuwani waa gurmad ah app ugu caansan xiriirada Samsung oo ay jiraan qaar ka mid ah codsiyada dhinac saddexaad badan oo laga heli karo dukaanka play oo aad naftaada isku dayo in la soo baxay.
Qaybta 4. An dhan-in-mid Desktop Contact kaabta Tool u Device Samsung
In 3 qaybood oo ugu horreeya, waxaan idin ​​tusay sida ay u gurmad Samsung xiriiro iyadoo la isticmaalayo adeega daruur, barnaamijyadooda Android. Qaybtan, waxaan doonayaa inaan idin ​​tuso hab kale, in uu yahay, taageero ilaa xiriirada ka qalab Samsung in PC aan ka kaaftoomi kasta. Si aad u samaysid iyada, waxaad u baahan tahay inaad gashato Aamin ah - Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) .
Fiiro Gaar ah: Waxaa si buuxda la jaan qaada badan oo telefoonada Samsung oo kiniin ah, sida Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S3, iyo in ka badan.
Tan iyo markii uu shaqada Windows iyo Mac version si la mid ah, sidaas, waan qaadan version Windows sida tusaale. Dadka isticmaala Mac, fadlan qaado tallaabooyinka la mid ah.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi version saxda ah ee software-ka on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad Samsung telefoonka ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ah. Haddii aad isticmaalayso Windows version ah, sidoo kale waxaad isku dayi kartaa xidhiidh WiFi.
Tallaabada 3. Run ah software oo uu furmo suuqa hoose, u tag kaabta One-click. Dhammaan noocyada file aad awoodo gurmad ku qoran yihiin baxay. Kaliya sii Xiriirada saxday. Markaas, guji Back Up in gurmad oo dhan xiriirada aad Samsung telefoonka ama kiniin in kombiyuutarka.
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad gurmad soo xulay xiriirada aad Samsung telefoonka ama kiniin ah? Tag column ka tagay ee suuqa hoose, guji Xiriirada. Dhamaan xiriirrada lagu soo bandhigi doonaa guddi saxda ah. Sax xiriirada aad doonayay oo guji Import / Dhoofinta > dhoofinta xiriir la doortay si ay u computer . Markaas, waxaad ka heli shan doorasho: in Outlook Express, si ay aragti 2003/2007/2010/2013, in Windows Live Mail, in Windows Cinwaanka Book, si file vCard. Dooro mid ka mid ah oo gurmad ah, kuwaas oo xiriir Samsung.
A Guide Full on Isticmaal Kies si ay u gudbiyaan Files
Ku rakib / uninstall / Update Kies on Mac
Ku rakib / uninstall / Update Kies on PC
Nuqul Data ka iPhone in Samsung
Data ka dhaqaaq Nokia in Samsung
Isbarbar dhigga u dhexeeya iPhone iyo Samsung Phone
Data ka dhaqaaq iPad in Samsung
Xiriirada ka Android inay Samsung dhaqaaq
> Resource > Android > Top 6 Samsung Xiriirada Tool kaabta in Hayso Xiriirada Secure